Chii chinonzi content marketing | ECommerce nhau
Mukati mekushambadzira kune akawanda mahunyanzvi: masocial network, kutengesa funnels, SEO chinzvimbo ... Anenge ese akabatana kune mumwe nemumwe, asi imwe ine chekuita nemhando yezvinopihwa vashandisi, kana vatengi, ndizvo zvirimo. area. Kunyanya kunyanya, iyo kushambadzira zvemukati Asi chii?
Kana iwe uchida kuziva kuti kushambadzira kwemukati chii, nei kwakakosha uye zvimwe zvinhu zvaunofanira kuziva nezve iyi hunyanzvi, isu tichakuudza zvese.
1 Chii chinonzi content marketing
2 Ndezvipi zvinangwa zvine kushambadzira zvemukati
3 Ndeapi marudzi ekushambadzira zvemukati aripo
4 Zvinopa mabhenefiti api
4.1 Wedzera mukurumbira uye mukurumbira wako
4.2 Wedzera organic traffic
4.3 Wedzera chinongedzo nevateereri vako
4.4 Wedzera database yako
5 Maitiro ekuita content marketing
Kushambadzira kwemukati ndiko kunoita kuti mutsara wekuti "zvirimo ndimambo" chirevo chayo chikuru. Uye isu tiri kutaura nezve chikamu chekushambadzira chinotarisa ipa zvemhando yepamusoro izvo vashandisi uye chinangwa chevateereri vanowira murudo uye ita kuti network yako ikure. Mune mamwe mazwi, tinogona kutaura kuti inzira yekushambadzira iyo inobatsira kugadzira, kuburitsa uye kugovera zvirimo zvekufarira kune vateereri vako. Nenzira iyi, kubatana kukuru pakati pevashandisi kunowanikwa uye iwe unogadzira nharaunda yakatenderedza izvo zviri mukati.
Ndezvipi zvinangwa zvine kushambadzira zvemukati
Chaizvoizvo, iyo Kushambadzira zvemukati hakuna chinangwa chimwe chete asi akawanda uye akasiyana. Iyo huru, uye iyo inonyanya kuzivikanwa, imhaka yekuti inoshanda kuzivisa vashandisi nezvemusoro wenyaya, senge nhau mubhurogi, pepanhau, kana kunyange nhau muchitoro chendaneti.
Asi chokwadi ndechekuti inogona zvakare kushanda nyore kuwedzera mwero wekutendeuka. Kureva kuti, kuburikidza nemavara iwayo unogona kuita kuti mushandisi aite chimwe chinhu, sekutenga chigadzirwa kana kuenda nacho kune chinongedzo kuti unyore.
Pamusoro pezvo, haungogadziri hukama neveruzhinji chete, asi unovatendera kuti vakutumire mhinduro, vapindure kwauri, vakubvunze, nezvimwe. Uye izvo zvinosimbisa hukama neveruzhinji. Kureva kuti, uchave nemukurumbira wakakura uye uchaitawo kuti veruzhinji vanzwe kuudzwa uye nekurairwa newe.
Ndeapi marudzi ekushambadzira zvemukati aripo
Chimwe chinhu chisingazivikanwe nevazhinji ndechekuti kushambadzira zvemukati hakusi kungobhuroga. Unorangarira here zvatakataura kuti zvese zvekushambadzira zvine chinongedzo chekubatanidza? Well content marketing ndechimwe chazvo.
Uye ndezvekuti zviri mukati zvinogona kuva munzvimbo dzakawanda:
Pasocial media: nekuti iwe unofanirwa kuendesa meseji inobatanidza neruzhinji (apa ndipo panonyanya kukosha kunyora nekunyora nyaya).
Mune infographics: Nekuti haisi yekungoita pfupiso chete, asi nezvekutsvaga iwo mazwi chaiwo ekuita kuti anzwisise uye zvakare kubatana neruzhinji.
Pamablog: ndiyo inonyanya kuzivikanwa uye inova chishandiso chine simba kwazvo. Vazhinji vane pfungwa yekuti havachabatsiri, asi ivo vakarasika chaizvo; Ehe, iwo anobatsira, uye achiwedzera ese ari maviri eSEO uye kugadzira nharaunda kana iwe uchikwanisa kupa zvemhando yepamusoro.
Mune podcast nemavhidhiyo: nekuti vanoda script. Iwe unofunga kuti ese ma youtubers uye podcasters vanotanga kutaura vasina script kumashure kwavo? Zvakanaka, iwe wakarasika, vanayo uye yakavakirwa zvakanyanya pakushambadzira zvemukati sezvo vachifanira kuziva zvavachataura, sei, riini ... kugadzira yekumutsa-kufona kumushandisi.
Zvinopa mabhenefiti api
Iye zvino zvawave kuziva zvishoma nezve kushambadzira zvemukati, ungangoda kuziva izvo zvakanakira kutanga kuishandisa. Pakati pavo, tinogona kutarisa pane zvina:
Wedzera mukurumbira uye mukurumbira wako
Fungidzira iwe une bhurogi revanhu. Iwe wakadzidza Basa Sayenzi uye unotanga kunyora pamusoro pezvaunoziva. Iwe hausi kugadzira chero chinhu uye unozviita nekupa vashandisi ruzivo rwakakosha.
Mushure menguva, izvo blog ichave chiremera, nekuti iwe unopa iyo inodiwa, yechokwadi uye inobatsira ruzivo, chimwe chinhu chiri kutsvaga vashandisi.
Wedzera organic traffic
Kana tikaenderera mberi nemuenzaniso iwoyo, vanhu vakawanda vachauya kupeji rako kuzokuverengera, kubvunza uye kunyange kukubvunza mibvunzo pachivande kana kuburikidza nemhinduro. Kana ukavapindurawo, unenge uchiita kuti vanhu vakushanyire zvakanyanya uye zvinoita Google inodudzira saiti yako seyakakosha.
Unowanei pazviri? Vandudza nzvimbo yako.
Wedzera chinongedzo nevateereri vako
Tisati tataura kuti vashandisi vanogona kukubvunza mibvunzo pachivande, mumashoko, nezvimwe. chokwadi? Zvakanaka, izvo zviri kugadzira chinongedzo nevashandisi ivavo. Izvo zvinosanganisira kwete chete kuti vachakutevera, asi kuti vanogona kukukurudzira. Uye isu tatoziva kuti izwi remuromo richiri kushanda kana kutopfuura.
Wedzera database yako
Nekuti vanhu vakawanda vanoramba vachiuya kubhurogi rako, kana ukavanyengetedza, ivo vanozopedzisira vanyoresa, saka unogona kutumira zvinyorwa zvako kune vanhu vazhinji uye zvinobata zvese zviri pamusoro.
Maitiro ekuita content marketing
Takakupwisa here? Ikozvino ndipo panouya chinhu chakaoma: shanda pakushambadzira zvemukati. Haisi basa riri nyore, ndiko kuti, hazvina kukwana kufunga nezvechinyorwa, nyora chinyorwa, chibudise uye ndizvozvo. Kumirira kuti vauye. Hazvinyatsoshanda zvakadaro.
Chokutanga pane zvose unofanira kuongorora. Ndiko kuti, zvichibva pane bhizinesi rako, iwe unofanirwa kuziva izvo vateereri vako vavari kutsvaga paInternet, kana kuti paGoogle. Ipapo ndipo paunogona kuvagadzirira zvemukati zvinobatsira. Cherechedza kuti hatina kuti "mhando". Nokuti kunyange iwe ukanyora chinyorwa chikuru, kana chisingafadzi ani zvake, hachizoiti chero chakanaka.
Kana iwe uchinge waita tsvagiridzo (iyo inowanzouya mukutamba neSEO uye mazwi makuru), chinhu chinotevera chaunofanirwa kuita kusvetukira mukunyora. Asi usanyore kunyora, asi nyora yakanakisa chinyorwa paInternet.
Pakutanga havazokuverengei. Zvitore. Asi kana ukaramba uri mumutsara iwoyo, Google ichatanga kuratidza kufarira iwe. Uye izvo zvine chekuita kune vatengi nevashandisi vanosvika peji rako. Uye vanokuverenga. Uye vanogona kunyoresa.
Ma social network, izwi remuromo, hukama nemamwe mapeji ... zvese izvi zvinogona zvakare kubatsira kuita kuti kushambadzira kwemukati kubve.
Zvinokujekera here kuti kushambadzira kwemukati chii? Une kupokana here? Wobva watibvunza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Chii chinonzi content marketing